ဖိုရမ်များခွဲပေးထားခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်တွင် အသင်းဝင်တို့ နည်းပညာများကို ဝေမျှဘို့လွယ်ကူစေရန်... အထူးအသင်းဝင် ကိုKZnT နှင့် ကိုကျောက်ဖြူတို့ အကြံပေးချက်များအရ...။
( ၁ ) Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ
( ၂ ) hardware များဆိုင်ရာ
( ၃ ) software များဆိုင်ရာ
( ၄ ) network ပိုင်းဆိုင်ရာ
( ၅ ) window နှင့်သက်ဆိုင်သော
စသော ဖိုရမ်ခွဲများကို... ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ.. အောက်မှ ခွဲထုတ်လိုက်ပါသည်..။ ထိုသို့ခွဲထုတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်.......အသင်းဝင်များအနေဖြင့် အဆိုပါဖိုရမ်များရှိ ပို့စ်များအား လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာ ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်...။ အသစ်ဝင်ရောက်လာသော အသင်းဝင်များအနေဖြင့်လည်း..... အဆင်ပြေစွာ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်...။
တဆက်ထဲမှာပင်... Operating Systems များအောက်တွင်...
၁) Window XP
၂) Window Vista
၃) Window 7
၄) Linux OS
၅) Mac OS and Other OS
များဟူ၍ အသင်းဝင်များ လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်စေရန်အတွက် ခွဲပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်...
$ညိုမင်းလွင်$, ချယ်ရီမင်း, ငါးကြော်, စမောလေး, ဒဿဂီရိ, မိုးလွင်, မှတ်ပုံတင်ရန်, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, academy, arkaraung, Aung Aung, bonge, bunny, driftboy, g00gle, hellboy, karen B boy, kaung kin lu, kyaukphyu, KznT, MilkyWay, minthike, ninimar, pannuko, phoetharlay, phyothuhein, specialspecial, thureinsoe, tu tu, zo
ပြန်စာ - ဖိုရမ်များခွဲပေးထားခြင်း
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်တွင်.. အသင်းဝင်များ Windows အမျိုးမျိုးအတွက် Theme များ၊ Icon များ၊ Wallpaper များ၊ Font များ ၊ စသည်တို့ကိုတစ်စု တစ်စည်းထဲ တွေ့မြင်နိုင်ပြီး.. အသုံးပြုပုံများနှင့်လှပဆန်းသစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး.. လဲ ဆွေးနွေးနိုင်အောင် ဖိုရမ်ခွဲ တစ်ခုကို ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ အောက်တွင် ထပ်မံခွဲထားပေးလိုက်သည်..
ယခင်က Web Development Section -1 အောက်တွင် Templates / Wallpapers /Icons ဖိုရမ်ခွဲ ရှိနေပြီးသော်လဲ အသင်းဝင်များ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက်.. ယခု Desktop fun အား ခွဲပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်.။ Web နှင့် ဆိုင်သော Template များ Icon များကို အဆိုပါဖိုရမ် တွင်ချန်ထားခဲ့မည်ဖြစ်ပြီး.. Desktop နှင့် ဆိုင်သော အကြောင်းအရာ တို့ကိုတော့... Desktop Fun သို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်ပါသည်..။
မြန်မာမိသားစုအသင်းဝင်များအနေဖြင့် သိရှိနိုင်ပါရန်.. အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်..
ချစ်သမီး, ချစ်သူမောင်, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, တာတာ, ဒဿဂီရိ, မိုးလွင်, မှတ်ပုံတင်ရန်, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, တေလေငှက်, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်လံလေး, ၀ါဆို, amaung344, arkaraung, Aung Aung, bonge, chitnyimalay, Emc Arkar, g00gle, kaung kin lu, kyaukphyu, KznT, ma mee, minthike, ninimar, pannuko, phoetharlay, phyothuhein, tu tu, zo
အသင်းဝင် ကို နေမင်းမောင် က ဂျပန်စာ၊ ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ တင်ပေးချင်တယ် ပြောလို့ မြန်မာမိသားစု အထူးသင်တန်း အောက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း၊ ဂီတသင်တန်း တို့ နည်းတူ ဂျပန်စာသင်တန်း ဆိုပြီး subforum တခု ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်စာ၊ ဂျပန်စကားလေ့လာချင်သူတွေ ဆွေးနွေးချင်သူတွေ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ။
နောက်ပိုင်း တော့ပစ်တွေ များလာရင်တော့ ရှာရလွယ်အောင် တော့ပစ်အညွှန်း sticky တခု လုပ်ပေးပါ့မယ်။
Last edited by Aung Aung; 25-02-2011 at 06:28 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, မှတ်ပုံတင်ရန်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, kaung kin lu, kyaukphyu, KznT, minthike, ninimar, phoetharlay, thureinsoe, tu tu, Ye Aung, zo